Jacaylka Vespa-da iyo Talyaaniga – Mogadishutimes
Talyaaniga sida ay u jecelyihiin baastada iyo seexashada galabkii waxay si la mid ah u jecelyihiin Vespa-dooda.
Vespada waxay ku jirtaa waxyaabaha lagu aqoonsado marka la tilmaamayo Talyaaniga. Waxaa yar qof ama reer aanan qabin. Dadka qaar waxay qabaan dhowr Vespa waxayna inta badan la eegtaan kalarka dharka ay wataan.
Waa mooto ka duwan mootooyinka kale, waa qafiif, qurux badan, mari karta wadooyinka ay Italy caanka ku tahay ee yar yar ee aysan baabuurta gali karin.
Noocyada dambe qaar ka mid ah sida Vespa 946 waxaa kalarada iyo fadhigaba qaabeeyay ninka caanka ku ah qaabeynta dharka ee Giorgio Armani.
Vespada waxaa inta badan lagu yaqanaa rag xiran Armani suits iyo dumar xiran dhar stylish ah.
Mootadan waxaa la sameeyay 70 sano ka hor waxaana sameeyay nin la yiraahdo Enrico Piaggio. Markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee aduunka ayaa laga codsaday Enrico Piaggio in uu sameeyo mooto lagu wadan karo wadooyinka iyo daaraha burbursan dhexdooda oo ka bixi karta hawsha adag.
Wuxuu sameeyay mooto aanan u ekeyn kuwii hore loo yaqaanay. Wuxuu qariyay oo uu daboolay matoorkii iyo qeybihii kale ee laga wadayay mootada.
Markiiba waxaa lala dhacay qafiifkeeda, quruxdeeda iyo sida ay uga bixi karto marxaladihii markaa jiray. Qaabka dhexda yar iyo dhawaaqeeda matorka markii la arkay ayaa loogu yeeray Vespa taasoo ah nooc cayayaanka ka mid ah oo afka Soomaaliga lagu yiraahdo Xoon.
Waxaa markiiba la bilaabay in dadka loo xayeesiyo waxaana gadmay malaayiin Vespa ah. Quruxdeeda waxaa isha ku dhuftay Hollywood waxayna u isticmaaleen filin caan ah oo la yiraahdo Roman Holiday taasoo ay ku arkeen dad badan oo aanan hore u aqoon mootada.
Waxay kaloo caan ku noqotay in ay isku sawiran modelada iyo jilayaasha marka ay tagaan Talyaaniga taasoo sii weyneysay magaceeda.
Wadamada sida weyn looga isticmaalo marka laga reebo Talyaaniga waxaa ka mid ah Ingiriiska. Inkastoo ay hadda kusii yaraanayaan Soomaaliya haddana 60-dameeyadii ilaa iyo 80-tameeyadii aad ayaa looga isticmaali jiray Soomaaliya.
Waa filinkii Gregory Peck iyo Audrey Hepburn ee Roman Holiday.